Vanoshanda neAirline uye Hutano vanodzidza kubva kuPakistan
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Vanoshanda neAirline uye Hutano vanodzidza kubva kuPakistan
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • wedzero • nhau • Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Pakistan Breaking News • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Nezuro Zviremera muPakistan zvakaburitsa mirau mitsva yekuvimbisa kushanda kwakachengeteka kwemauto emuchadenga.
Ndege dzese dzinozoiswa utachiona zvichienderana nemaitiro akatemwa neCAA pachiteshi chega chega vasati vatora vanhu. Chitupa chekubvisa utachiona kubva kunhandare yendege / mushandi chinofanira kusainisirwa uye kusimbiswa neveCAA Vashandi. Iyo disinfection inofanirwa kutemwa mumagwaro endiza. Kaputeni wendege anozozvigutsa maererano nekuteerera zvizere mirairo yePCAA pane disinfection. Iyo yakafanana disinfection standard ichave inosungirwa isati yatanga kubva kune imwe nhandare yendege kutizira kuPakistan.
2. Kuunganidzwa kwePPE yakakosha, inosanganisira masutu ekudzivirira, magirovhosi, masica ekurapa, magogorosi, uye mamaki eN-1, nezvimwewo zvinofanirwa kuchengetwa munhandare imwe neimwe
3. Fomu reInternational Passenger Health Declaration ichaendeswa kune vese vangangoenda kuPakistan vasati vakwira ndege.
4. Kuzadzikiswa kweInternational Passenger Health Declaration Foan nevanofamba / vachengeti (kana paine vacheche / vakaremara) richava basa remushandi. Fomu racho richazadzwa uye rosainwa usati wakwira ndege.
5. Ndege kuburikidza neayo station station maneja / kana iyo GHA pazvinoshanda ichave nebasa rekupa mutakurwi manifesto kune kwaanoenda nhandare muPakistan, pamberi pekutora kwendege. Maneja weAirport panhandare yekuenda anoendesa uno mufambi kune vane hanya! PCT / hurumende yehurumende inotarisa munhu pakarepo.
6.Vapfuuri vanofanira kuongororwa kuburikidza nemidziyo yekupisa yeCOVID-19 vasati vakwira. Chero chafariz scanner kana chakadzvanywa chisiri-chekubata chishandiso chishandiso chinoshandiswa kuchinangwa. Chero ani mufambi kana nhengo yevashandi vane tembiricha yemuviri yakasimudzwa ichaongororwa nachiremba wezvehutano panhandare yekutanga.
7. Kubhadhara mapasuru kunopihwa gap yeinenge imwechete pachigaro chiri padhuze. Vashandi vagere pabasa vanozogariswa pazvigaro nenzira yekuti gamba rataurwa pamusoro pechigaro chimwe chete richagadziriswa. Izvo zvichave zvinomanikidzwa kuchengetedza iyo aft mitsara mitatu isina munhu, uye inongoshandiswa chete kana zvikaitika zvekurapa.
8. Vapfuuri vanofanirwa kutevedzera zvinotevera kuraira panguva yekufamba nendege kuenda kuPakistan. Izvi zviri kuwedzera kune chero mimwe mirairo iyo yakarairwa kuitira kufamba kwakachengeteka kwemhepo, kana sekuburitswa neCabin Crew nguva nenguva panguva yekufamba:
a. Vatakuri vese vanofanirwa kupfeka masiki ekuvhiya mukati menguva yekubhururuka. Masiki acho achapihwa nendege pacheki yekupinda nendege vafambi havana yavo.
b. Vapfuuri vanofanira kungogara pazvigaro zvavakapihwa uye kwete kuchinja zvigaro chero zvodii. Ivo zvakare havatenderwe kuungana mundege panguva yekufamba kwemhepo
c. Iyo yekudzivirira tembiricha yemumwe mutakuri ichaongororwa mushure mechinguva chemaminetsi makumi mapfumbamwe. Yakarongedzwa isiri-yekudyidzana chishandiso chishandiso chinoshandiswa kuchinangwa.
d. Chero ani mufambi ane zviratidzo kana manzwiro eCOVID-19, kusanganisira asi asingagumi pakufema kwekufema, kukosora, kupisa kwakanyanya, uye huro, anofanira kukurumidza kuzivisa vashandi vekabhini.
9. Yese jongwe nevashandi vekabhini vachapfeka zvakakodzera Kudzivirirwa Kwemidziyo Yekuchengetedza (PPE) uye masiki ekuvhiya munguva yese yekubhururuka pasina kukanganisa kuchengetedzwa.
10.Cabin crew ichapa ruoko sanitizer awa yega yega panguva yekubhururuka kune mumwe munhu anofamba kunze kwekudya / chinwiwa sevhisi
11. Chikafu uye chinwiwa chakanyadziswa zvakanyanya nendege dzisingasviki maminetsi zana nemakumi mashanu.
12. Mitsara mitatu yeAft ichachengetwa isina munhu kune vafambi nevashandi vanoratidza zviratidzo zvekurwara.
13. Vafambi nevashandi vanoratidza zviratidzo zvekurwara vachasarudzika vakananga kumashure kwendege ndokuchengetwa ipapo kudzamara kwendege. Vanhu vakadai vacharamba vakagara pachigaro ichi mundege kusvikira panguva iyoyo vashandi vezvehutano vanoshevedzwa nevashandi vekabhini kuti vabude mune zvekurapa.
14. Mushure mekupedza kukwidza boarding, Senior Purser / Lead Cabin Crew inotora pikicha yenzvimbo yega yega yendege inoratidza vafambi vagere vakapfeka mamask. Mufananidzo wePassenger Seating, wakatorwa neMukuru Purser / Lead Cabin Crew mushure mekukwira, uchaendeswa kune vane hutano Vashandi vepanhandare yendege kubva pakuburitswa Vashandi zvemagetsi / kuburikidza neWhatsapp. Iyo ndege inochengetedza makopi emifananidzo iyi mune yayo rekodhi.
15. Cabin Crew inosasa mushonga wekuuraya utachiona munzvimbo yekuchenesa mushure memaminitsi makumi matanhatu ekubhururuka.
16. Asati amhara, Kaputeni wendege achasimbisa kune ane hanya neMhepo Traffic Controller kuti International Passenger Health Declaration Fomu yakazadzwa nevanhu vese. Fomu rakazadzikiswa rinotariswa pamusuwo webhiriji rebhodhi kuairport neveCAA / ASF Vashandi. Kaputeni wendege anofanirwa kusimbisa kuA TC kuti vese vanokwira ndege vazadza Fonn; kana zvisina kudaro, hapana munhu achabvumidzwa kudzika ndege imwe.
17. Vanoshanda mukabhini vachashandisa doro-based disinfection pukuta kuchenesa uye kuisa utachiona mumaoko avo. Mushure mekubata kana kurasa marara, maoko anofanirwa kucheneswa nema sanitizer nemaoko kana sipo. 18. Pavanosangana nevarwere vanorwara (vane zviratidzo zve COVID-19), vatariri vemakamuri vanofanirwa kuona kushandiswa kwemasks eN95. magirovhosi uye magogorosi anodzivirira mukuwedzera kune avo masutu eDziviriro.
19. Kuburuka kuchaitwa zvine mutsetse nenzira yakarongeka kubva kumberi kuenda kushure kuverengera nharaunda.
20. Mepu yechigaro ichapihwa nevashandi vendege pamwe nekopi yevatakuri manifesto kuPCAA neveVashandi vezvehutano, uye risiti ichawanikwa kubva kubato rinotambira pamwe nezita uye zita.
21. Mikwende yese yevatakuri nemutoro zvinotakurirwa utachiona nendege munguva pfupi ichangoburutsa mundege. Ndege ichave nebasa rekupihwa mamask anokodzera uye magirovhusi kune vashandi vane chekuita nekubata mukwende wakatariswa uye nhumbi.
22. Vafambi havazobvumidzwa kunhonga nhumbi dzavo kubva mukwende yemotokari ivo pachavo. Panzvimbo iyoyo, iyo yendege / vashandi veGHA vanotora mukwende kubva kubhero voaisa nenzira yekuti chidimbu chimwe nechimwe chiri panzvimbo yakachengeteka kubva kune imwe. Vafambi vanomirira kumashure kwezvipingamupinyi zvakaiswa nenzira yekuti nharaunda irambe yakachengetedzwa. Mapoka evatakuri, asingadarike IO rimwe nerimwe, achabvumidzwa kunhonga nhumbi dzavo kamwechete. Ndege / Vashandi veGHA vanofungidzirwa kubata mukwende vachapfeka mamask anodzivirira uye magirovhosi.
23. Vese vafambi nevashandi vekufamba nendege, kusanganisira nendege dzakahayiwa, vachasvika nemuvako wechiteshi chevapfuuri Paunosvika, vese vafambi vanozoendeswa kunzvimbo yekusvikira nevashandi vePCAA.
24. Fomu rePassenger Health Declaration richaunganidzwa kubva kune mumwe mufambi nevashandi vehutano munzvimbo yekutandarira.
25. Pakusvika muimba yekutandarira, vafambi nevashandi veendege vanozotorwa pakuongorora.
26. Vese vafambi nevashandi vanozoongororwa Covid-19 nekukurumidza sezvinobvira mushure mekumhara muPakistan. Vapfuuri vanozoendeswa kunzvimbo yekuisa vanhu pavanosvika. vafambi vakapinda mukati vachabvumidzwa kusarudza pakati penzira mbiri dzekuisa vanhu kwavo vega, pasina muripo wehurumende yekuparadzanisa nzvimbo kana vanobhadharwa nehurumende botels / faciliti.es. Kuedzwa kuchaitwa mushure mekuuya kunzvimbo yekuisa vanhu.
a. Vapfuuri vane yakaipa Covid-19 mhedzisiro vanozobvumidzwa kuenda nemirairidzo yekuzviparadzanisa pamba kuti vapedze mazuva gumi nemana. b. Vapfuuri vane yakanaka Covid-14 mhedzisiro ichagadziriswa seinotevera:
1. Zviratidzo zvevarwere kuti vange vachibatwa sekuenderana nezvakatemerwa zviga zvehutano.
27. Varwere vasina zviratidzo kubva kune mamwe mapurovhinzi kuti vange vachibatwa sezvakatemwa zviga zvehutano uye kuchengetwa vari vega / vega kunzvimbo dzekupatsanurwa kusvikira mazuva gumi nemana apera. Mamiriro ezvinhu akanaka haafanirwe kudzoserwa kudunhu rekumba kudzamara kwapera nguva yekuisa vanhu.
iii Varwere vasina zviratidzo kubva mudunhu rinotambira kuti vave nekwaniso yekuisa dzimba dzekuvharirwa. Kana zviremera zvematunhu zvikaona sekuti pamba pakavharirwa vanhu pamba panogona kuitika. Murwere anogona kutumirwa kumba aine nhungamiro yekuzviparadzanisa pamba kwemazuva gumi nemana. Zvikasadaro, varwere vanozobatwa sekuenderana nezvakatemerwa zviga zvehutano uye kuchengetwa vari vega / vega zvivakwa kusvika pakupera kwemazuva gumi nemana.
28. Vashandi vendege kuti vaedzwe pane zvakakosha. Kukoshesa kwekuyedza zvakare kunoshandiswa kune mamwe maeca1 kesi; sevaya vanoperekedza zvitunha. Hapana kuregererwa kunozobvumidzwa pane yekuisa wega / yekuyedza maprotocol kunze kwekupa pekutanga kwekuyedza muzviitiko zvinotarisirwa.
Vafambisi vengarava yekumira kana kurwira nhumbi kunodzoka kubva kwayakatangira uko vashandi vasina kusiya ndege kwenguva ipi neipi vachasunungurwa kubva pakuiswa kwavo vega nekuyedza maprotocol kana vasvika kuPakistan.
29. Kufambisa kuenda kunzvimbo yekuisa kwese kunofanirwa kurongedzwa nezviremera zvine chekuita. Hapana kusangana uye kwaziso zvinotenderwa panhandare.
30. Vatakuri vanozo. kuve nemutoro wezvese zvinodhura zvekugara kwavo kana vakasarudza kugara muhotera / kubhadharwa nzvimbo. Hurumende inodzivirira nzvimbo dzinenge dzisina mutengo. Vapfuuri havazokwanise kuchinjisa zvivakwa kana kwavo kwega kwatanga kunze kwekunge zvaonekwa zvakakodzera nezviremera. Kunyange hurumende ichaedza napose painogona napo kutakura vafambi zvichienderana nezvavanoda, zvivakwa zvakabhadharwa zvine mashoma uye hazvigone kuvimbiswa. Zviremera zviri pasi zvichave nezwi rekupedzisira pekuti vafambi vanoiswa kwavo voga.
31. Dhata revafambi vese nevashandi vekubhururuka nenhamba dzenharembozha dzavo dzinochengeterwa kurekodha uye nekutevera.